Kordhinta Akhriskaaga | Martech Zone
Monday, August 11, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aad tahay blogger shirkad ama aad leedahay blog kuu gaar ah, mid ka mid ah arrimaha koritaanka ee bartaada waxay ku xirnaan doontaa awoodda aad u leedahay inaad la xiriirto akhristayaasha cusub ee aan ka warqabin inuu jiro balooggaagu. Tan waxaan ku sameeyaa dhowr farsamooyin ah order siday u kala muhiimsan yihiin:
Ka faallaynta baloogyada kale, gaar ahaan markay isku warshad yihiin. Waan ka dhex helayaa Warqadaha Google, Baadhitaan ku samee barta Google, Iyo Technorati.
Waan daabacayaa RSS feed bogagga ugu badan ee aan kari karo, oo ay ku jiraan bogag kale iyo bulshada shabakadaha.
Waxaan iska diiwaan geliyaa degel kasta oo 2.0 ah oo aan kari karo waana hubin karaa in cinwaanka balooggayga iyo cinwaanka quudinta RSS ay si uun ugu dhex muuqdaan astaanteyda.
Waan adeegsadaa astaamaha ogeysiinta otomaatiga ah ee loogu talagalay Twitter (in kasta oo ay si niyad jab leh u ogeysiineyso haddii aan dib u keydiyo qoraal hore loo daabacay).
Waxaan ka hadlayaa dhacdooyinka gobolka markasta oo ay suurta gasho.
Waxaan ku siinayaa cinwaanka boggeyga kaararka ganacsiga qof kasta oo aan la kulmo!
Waxaan ku taageersanahay barta internetka anigoo banaanka soo dhigaya waxyaabo bilaash ah iyo qalab dadka waawayn inay adeegsadaan.
Waxaan sidoo kale isku dayaa inaan ku dhajiyo xiriiriyeyaasha qaar boggaga kale, sida Knol iyo Wikis kale.
Ugu dambayn, waxaan ku tabarucayaa qor qoraalada martida markii la ii soo bandhigo oo aanan marnaba diidin fursad aan ugu qoro degel ballaadhan markii lay weydiiyo, iyadoon loo eegin magdhowga!
Muddo bil laga joogo, ayaa ila soo xiriiray Xayawaanka Talent si ay u qoraan tiir bille ah oo ku saabsan Warbaahinta Bulshada iyo Suuqgeynta boggooda. Toban sano ka hor, Talent Zoo waxaa loo yaqaanay mid ka mid ah hay'adaha qorista ugu horreeya ee shirkadaha ka shaqeeya warshadaha xayeysiinta. Erayadooda:
Markuu dot-com noqday dot-bam, TalentZoo.com wuu koray. Hadda waa xog-ururin khadka tooska ah halkaasoo suuq-geynta iyo shirkadaha isgaarsiintu ay ka eegi karaan in ka badan 100,000 oo dib u bilaabaya xirfadlayaal ilaa xirfadlayaal. Waa goob shaqo doon ay ka helaan fursado shaqo. Iyo TalentZoo.com waxay haysaa hal-abuurnimada, sida ku darista waxyaabo badan oo aqrin-dheeri ah oo ku saabsan wararka warshadaha, isbeddellada, la-talinta xirfadaha iyo sidoo kale boorarka fariimaha iyo boodhadhka si ay u soo jiitaan shaqo doon badan.
Maqaalkeygii ugu horreeyay waa in la daabaco Arbacadan! Waxaan sugayaa soo dhaweynta maqaalka (tilmaam: warshad / teknolojiyad cusub oo qarxaysa hadda taas oo u oggolaanaysa suuqleyda inay ka faa'iideystaan ​​oo ay otomaatig ka dhigaan). Waxaan sidoo kale rajeynayaa inaan ku gaaro dhagaystayaal cusub iyada oo loo marayo Talent Zoo! Shaki kuma jiro in qaar ka mid ah akhristayaasha ay dib ugu laaban doonaan qoraalkayga.
Tags: shaqaalaha wareegamultidomainiskaashiga bulshadabulshada deegaankakaligobolka iskaashiga internetka
Adiga iyo Adiga Miyaad Dhagaysan Tahay?
Aug 12, 2008 at 7: 58 AM
Adoo adeegsanaya liiskaaga liistada hubinta, waxaan ku daboolay #s 1-4. Waqti aad ku shaqeyso #s 5-8! Waad ku mahadsantahay talooyinka, Doug.
Agoosto 12, 2008 saacaddu markay ahayd 3:49 PM
Dulmar guud. Waad ku mahadsantahay talooyinka. # 3 waa waqti cunid, runtii waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan # 7. Waa inaad la timaaddaa fikrad cusub inkasta oo. Mar labaad mahadsanid.
Aug 15, 2008 at 11: 02 AM
Waxaan ku daabacaa dhowr daabacadood oo qadla'aan ah, oo ay ku jiraan 8 joornaal toddobaadle ah oo ku baahsan gobolka. Taasi si toos ah uma saameynayso akhristaheyga baloog, laakiin waxay kordhineysaa aqristaheyda guud (oo ka badan 30,000 asbuucii).